SAMSUNG ကအပေါ်ကိုပဌနာမယ့်သီချင်းဆိုထားရန်ကဘယ်လို - အန်းဒရွိုက် - 2019
Living ပုံရိပ် - desktop ပေါ်မှာတစ်နောက်ခံပုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားနိုင်ကာတွန်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယို, ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, Window သာငြိမ်ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ desktop ပေါ်မှာ animations တွေကိုပေါ်တွင်တင်ပေးရန်, သငျသညျအထူးဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်၏ desktop ကာတွန်းပေါ်တွင်တင်လုပ်နည်း
တိုက်ရိုက်လွှနောက်ခံပုံများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ အခြားသူတွေကဗီဒီယိုကလစ်များ (က AVI, MP4,) ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင် SIFCO ကာတွန်းတချို့ကသာထောက်ပံ့မှု (GIF ကို format နဲ့ဖိုင်တွေ) ။ Next ကိုငါတို့သည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကာတွန်း့ screensavers ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောလူကြိုက်အများဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကိုကြည့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် Applications ကို "တိုက်ရိုက် Wallpaper"
Method ကို 1: PUSH ဗီဒီယို Wallpaper
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏တရားဝင် site မှအခမဲ့ download အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ "ခုနစျ" နဲ့စတင် Windows operating စနစ်များအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ desktop ပေါ်မှာနောက်ခံပုံနှင့် (YouTube ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ) ကကာတွန်းဗီဒီယိုများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ခွင့်ပြုပါတယ်။
PUSH ဗီဒီယို Wallpaper Download
ဝေါလ်ပေပါကို install ဘို့ညွှန်ကြားချက်များ:
အထုပ်ကို run နှင့် installation wizard ကို၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာပါ။ လိုင်စင်သဘောတူညီချက် Accept နှင့်ပုံမှန်အားတပ်ဆင်နှင့်အတူဆက်လက်။ installation ကိုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်ပစ္စည်းများချွတ်စစ်ဆေး "Screensaver နှင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ" နှင့် "ဗီဒီယို Wallpaper စတင်ရန်"နှင့်စာနယ်ဇင်း "Finish ကို".
မျက်နှာပြင်ချွေတာရွေးချယ်မှုများဖွင့်လှစ်။ drop-down list ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ဗီဒီယို Screensaver နှင့် Push" နှင့်စာနယ်ဇင်း "န့်သတ်ချက်များ"နောက်ခံပုံကိုပြောင်းလဲရန်။
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "အဓိက" နှင့်ဝေါလ်ပေပါကိုရွေးပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုက GIFCA နှင့် YouTube-Link ကို (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Add"ထုံးစံကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ကာတွန်း add ရန်။
အဲဒါကိုလမ်းကြောင်းကို Specify နှင့်စာနယ်ဇင်း "playlist မှ Add"။ အဲဒီနောကျက tab ကိုအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည် "အဓိက".
စာနယ်ဇင်းများ "URL ကို Add"Youtube ကိုမှ link တစ်ခုပေါင်းထည့်ရန်။ လိပ်စာနဲ့ကလစ်နှိပ် Enter "ပြသစာရင်းများ Add".
tab ကို "Settings" ကို သင်သည်အခြား setting များကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, အစီအစဉ်ကို Windows နဲ့ run ဖို့ခွင့်ပြု, ဒါမှမဟုတ်ဗန်းမှလျော့ချ။
အားလုံးပြောင်းလဲမှုများကိုအလိုအလျှောက်အကျိုးသက်ရောက်ယူပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်ချွေတာကိုပြောင်းလဲစေရန်, ရိုးရှင်းစွာ tab ကိုပေါ်ရရှိနိုင်စာရင်းကနေ select လုပ်ပါ, "အဓိက"။ ဒါဟာအစပုံရိပ် (ဖြည့်ရန်, စင်တာ, လမ်းပိုင်း) ၏အနေအထား, (ဗီဒီယို) ကိုအသံအတိုးအကျယ်ညှိ။
Method ကို 2: DeskScapes
Windows7ကို, 8, 10 PUSH ဗီဒီယို Wallpaper မတူဘဲထောက်ခံပါတယ်, DeskScapes သင်တည်ဆဲဝေါလ်ပေပါကိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည် (Filter ကို add, အရောင်ချိန်ညှိ) နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံမော်နီတာထောက်ခံပါတယ်။
နောက်ခံပုံကို install လုပ်နည်း:
အဆိုပါဖြန့်ဖြူး run ခြင်းနှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ထို program files တွေကို unpacked ပါလိမ့်မည်သည့် directory ကို Specify နှင့်တပ်ဆင်ပြီးစီးသည်အထိစောင့်ပါ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "30 ရက်နေ့စမ်းသပ် Start"ရက်ပေါင်း 30 အဘို့စမ်းသပ်ဗားရှင်းကိုသက်ဝင်စေရန်။
မှန်ကန်သော email address နှင့်ကလစ်နှိပ် Enter "Continue"။ အီးမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုအီးမေးလ်ထဲမှာ link ကိုလိုက်နာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "30-Day ကိုစမ်းသပ် Activate"။ ဒီ application များကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ပါလိမ့်မည်နှငျ့အလုပျအတှကျအမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စာရင်းထဲကတစ်ဦးဝေါလ်ပေပါကိုရွေးချယ်ပါနဲ့ click နှိပ် "ငါ့ဒက်စ်တော့မှ Apply"တစ်ဦး screensaver အဖြစ်ကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့။
တစ်ထုံးစံ file ကို add အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိ icon ကို click ပါနဲ့ရွေးဖို့ "Folders" - "/ Remove ဖိုလ်ဒါ Add".
ရရှိနိုင် directory များစာရင်းတစ်ခု။ စာနယ်ဇင်းများ "Add"သင် desktop ပေါ်မှာတစ်နောက်ခံပုံအဖြစ်အသုံးပြုချင်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ကာတွန်းဖို့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ရန်။ ထို့နောက်ပုံပြခန်းတွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
တူရိယာအကြားရွေးချယ်ထားသည့်ပုံ, switch ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် "Adjust", "အကျိုးသက်ရောက်မှု" နှင့် "အရောင်".
အခမဲ့ဗားရှင်းတရားဝင် site မှ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင် desktop ကိုနောက်ခံ SIFCO ကိုဗီဒီယိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Method ကို 3: DisplayFusion
PUSH ဗီဒီယို Wallpaper နှင့် DeskScapes မတူဘဲအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝ Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်မျက်နှာပြင်သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းသူများအား, ဝေါလ်ပေပါကိုရွေးပါနှင့်စိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဖြန့်ဖြူး Start နှင့် installation ပရိုဂရမ်ကိုစတင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်စစ်ဆေးနှင့် DisplayFusion ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
မီနူးကိုဖွင့် "Start" သို့မဟုတ်အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ဖြတ်လမ်းနှင့် box ကို tick "DisplayFusion သင်၏ desktop wallpaper ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Allow" နှင့်နောက်ခံပုံရိပ်တွေ၏အရင်းအမြစ်ကိုရွေးပါ။
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာတော့ကို select "ကျနော့်ရဲ့ရုပျပုံမြား"သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေပုံတစ်ပုံကို upload လုပ်ရန်။ ရွေးချယ်စရာသင်သည်အခြားအရင်းအမြစ်ရွေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်ပ URL ကို-လိပ်စာ။
ဖိုင်ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းမှလမ်းကြောင်းကို Enter "ပွင့်လင်း"။ ဒါဟာရရှိနိုင်၏စာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ရုပ်ပုံများကိုထည့်ပါ။
လိုချင်သောပုံရိပ်နှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "Apply"သင့်ရဲ့ဝေါလ်ပေပါအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
ဒါဟာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်များနှင့်အတူမသာထောက်ခံပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေရဲ့မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာဆလိုက်ရှိုးညှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်မျက်နှာပြင်ချွေတာတဲ့ timer ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
သင်၏ desktop ကာတွန်းပုံရိပ်ပေါ် Install သာအထူးဆော့ဗ်ဝဲ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ DeskScape ရိုးရှင်းတဲ့ interface နဲ့အဆင်သင့်ပုံများပါတဲ့ built-in စာကြည့်တိုက်ပါရှိပါတယ်။ PUSH ဗီဒီယို Wallpaper မသာ, သင်သည်သင်၏နောက်ခံပုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြု SIFCO, ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုက။ DisplayFusion tools များ၏ကျယ်ပြန့တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်သင်နောက်ခံပုံများသာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုပေမယ့်တခြား parameters များကိုစောင့်ကြည့်။
ဗီဒီယို Watch: Samsung Galaxy Note Edge Ekran Değişimi (အောက်တိုဘာလ 2019).